समाचार - कसरी बौद्धिक प्रवाह पेरिस्टालिटिक पम्प आउटलेट पानी ड्रिपिंग फोनोमोनसँग डील गर्ने
जब हामी तरल स्थानान्तरण गर्न फ्लो पेरिस्टालिटिक पम्प प्रयोग गर्छौं, हामी भेट्टाउनेछौं कि पाइपलाइनमा रहेको तरल द्रुत बहाउँदैन, सामान्यतया बिस्तारै ड्रिप हुन्छ। यो होइन कि पम्प घुमाउरो रोकिन्छ र तरल हाम्रो कल्पनाशक्तिमा बगेर रोकिन्छ, तर तरल प्रवाह बन्द हुन्छ जब पाइपमा तरल ड्रिप हुन्छ। यस घटनाको घटनालाई ड्रिपिंग घटना भनिन्छ।
प्रवाह peristaltic पम्प को टपकाव को कारणहरु?
यो सामान्य तरल पदार्थ घटना हो। कारण यो छ कि जब पम्प तरल स्थानान्तरण गर्दै छ, पम्प आउटलेट पाइप तलतिर मुन्मुख हुन्छ र निश्चित गुरुत्व हुन्छ। जब पम्प घुमाउन रोक्दछ, तरल यसको ढिलोपन र गुरुत्वाकर्षण शक्तिको कारण बिस्तारै बग्न थाल्छ, र नलीमा तरल पूर्ण रूपमा ड्रिप नभएसम्म परिणाम नलीको मुखमा टिपिरहन्छ। यस समयमा, केहि व्यक्तिले सोच्लान् कि तरल गुरुत्वाकर्षणको साथ ड्रिप हुँदैछ, यदि सिफन घटना देखा परेमा के गर्नुपर्छ? वास्तवमा, चिन्ता नगर। मलाई विश्वास छ कि पेरिस्टालिटिक पम्पको कार्य सिद्धान्तबाट सबै परिचित छन्। पम्प रोलर्समा निर्भर हुन्छ, निलियां निचोल्न (इनलेटले नकारात्मक दबाव दिन्छ र आउटलेटले सकारात्मक दबाव दिन्छ), र दबाव भिन्नता प्रसारणको लागि प्रयोग गरिन्छ। रोटेशन रोकिंदा पनि नली कडा निचोरेर जान्छ, ताकि यस घटनाबाट बच्न इनलेट र आउटलेट बिच्छेदन भयो।
ड्रिपिंग घटनाको लागि समाधान
मैले नलीमा तरल ड्रप हुनुको कारणहरू उल्लेख गरे। ती मध्ये एक होजको लोचपूर्ण तनाव हो। तरल ड्रिप हुनुको कारण यो हो कि नलीको तनाव तरलको आफ्नै लचीलापन र गुरुत्वाकर्षण भन्दा कम हो। यदि हामी तरलमा तलको बल भन्दा ठूलो बनाउन यो लोचिक तनाव विस्तार गर्छौं भने यो घटना परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ।
१. नली आउटलेटको व्यास घटाइएको छ, ट्यूबमा तरल पदार्थ सानो हुन्छ, तर लोच परिवर्तन हुँदैन, यसैले समस्या समाधान हुन्छ।
२. प्रेसर भल्भ बढाउनुहोस् र आउटलेटमा एक तर्फी दबाव वाल्भ सेट गर्नुहोस्। यो काम गर्ने बित्तिक पम्पको दबाबबाट भल्भ खुल्नेछ, र भल्भ स्वाभाविक रूपमा बन्द हुने बित्तिकै बन्द हुनेछ।
यो ध्यान दिनु पर्छ कि आवेग घटना को समस्या। जब पम्प तरललाई स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गरिन्छ, आवेग घटनाले पेरिस्टालिटिक पम्प नलीमा रहेको तरललाई पछाडि पछाडि पछाडि पछाडि छोडिन्छ। तसर्थ, नलीको व्यास पम्प चिसो पछाडि लम्बाइ भन्दा ठूलो हुनुपर्दछ, अन्यथा यो तनावको कारणले हुन्छ कुनै ड्रिपि formed गठन हुँदैन।
माथिको प्रवाह peristaltic पम्प को टपकाउने घटना को घटना र रोकथाम को बारे मा छ। यदि तपाईं अझै पक्का बुझ्नुहुन्न वा यसलाई गलत तरिकाले सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने, तपाईं लिड फ्लुइड बिक्री पछि ईन्जिनियरलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ।